Wararka Xanta Suuqa Kala Iibsiga Ee Maanta Szoboszlai, Sanchez, Messi, Willian, Isco, Khedira
HomeHoryaalada KaleWararka Xanta Suuqa kala iibsiga ee Maanta Szoboszlai, Sanchez, Messi, Willian, Isco, Khedira
November 21, 2020 Horyaalada Kale, Horyaalka France, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
ku soo dhawaada Wararka xanta Suuqa kala iibsiga ee Ciyaaro.com
Arsenal ayaa baareysa qaabab ay u qaabeyso heshiiska qadka dhexe ee reer Hungary Dominik Szoboszlai, oo 20 jir ah, kaasoo qandaraaskiisa RB Salzburg lagu burburin karo 23 milyan ginni . (Mirror)
Tottenham ayay u badan tahay inay saxiixyo dheeri ah sameyso bisha Janaayo, waxaana laga yaabaa inay u dhaqaaqdo daafac cusub, iyadoo daafaca dhexe ee reer Colombia Davinson Sanchez oo 24 jir ah laga yaabo inuu baxo. (Football Insider)
Tababaraha Barcelona Ronald Koeman ayaa weli ku qanacsan in Lionel Messi uu sii joogi doono kooxda, waxaana uu diiday in lala galo dood ku saabsan mustaqbalka 33 jirka kubadsameeyaha reer Argentina. (goal)
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa sheegay inuusan wax fikrad ah ka qabin hadii kooxda heysata Premier League inay bartilmaameedsan doonto daafac cusub bisha Janaayo marka uu furmo suuqa kala iibsiga. (Goal)
Liverpool ayaa loo sheegay inay bixin doonaan .7 26.7m haddii ay doonayaan inay la soo wareegaan daafaca Ajax Perr Schuurs, 20, iyadoo AC Milan ay sidoo kale xiiseyneyso daafaca dhexe ee reer Holland. (Sempre Milan via Liverpool Echo)
Tababaraha Everton Carlo Ancelotti ayaa hoos u dhigay wararka xanta ah ee la xiriirinaya labo ka mid ah ciyaartoydiisii ​​hore – ciyaaryahanka khadka dhexe ee Real Madrid iyo Spain Isco oo 28 jir ah iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Juventus iyo Jarmalka Sami Khedira, 33. (Liverpool Echo)
West Ham ayaa sidoo kale lala xiriirinayay Khedira oo ku guuleystay Koobka Adduunka. (Sport Mediaset, via Team Talk)
Khedira lama filayo inuu u dhaqaaqo MLS-ka Mareykanka. (Bild)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Switzerland Granit Xhaka, oo 28 jir ah, ayaan qorsheyneynin inuu ka tago Arsenal kuna biiro Inter Milan bisha Janaayo. (Calciomercato via Mirror)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Mareykanka Giovanni Reyna, 18 – oo lala xiriirinayo Liverpool – ayaa qandaraas cusub oo waqti dheer ah u saxiixay Borussia Dortmund .(Team Talk)
Erling Haaland aabihiis, Alf-Inge, kii hore ee Nottingham Forest, Leeds iyo khadka dhexe ee Manchester City , wuxuu qirey weeraryahanka reer Norway, oo 20 jir ah, inuu soo jiitay Premier League laakiin wuxuu diirada saarayaa inuu koobab la qaado kooxda haatan ee Borussia Dortmund. (Sport 1, via Mirror)
Ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe ee Manchester City Trevor Sinclair, ayaa rumeysan imaatinka kubadsameeyaha kooxda Barcelona Lionel Messi, oo 33 jir ah, inuu yimaado Etihad Stadium ‘inay tahay lama huraan’ ka dib qandaraas kordhinta tababaraha Pep Guardiola. (Talksport)
Chris Smalling ayaa ku dhaleeceeyay Manchester United inay u soo bandhigtay hadalo kooban ka hor inta uusan u dhaqaaqin Roma sanadkii hore, laakiin 30 jirkaan daaficii hore ee England ayaa sheegay inuu ku raaxeysanayo waqtigiisa Italy. (Telegraph – subscription required)
Leeds United ayaa 20 m ugu dhaqaaqi karta garabka Rangers Ryan Kent, 24 jirkan, hadii uusan awoodin inuu kala xaajoodo heshiis cusub kooxda Ibrox. (Football Insider)
Maalin kasta kala soco Ciyaaro.com Xanta suuqa kala iibsiga